Casa Arangio 1 - Ifestile kwiVendicari 🌊 - I-Airbnb
Casa Arangio 1 - Ifestile kwiVendicari 🌊
Imalunga neemitha ezili-150 ukusuka elunxwemeni lwaseSan Lorenzo kumda osemazantsi kunye ne-Wildlife Oasis emnandi yaseVendicari. Ukusuka apha uya kufikelela ngokulula kwezona zixeko zintle zoMzantsi Mpuma weSicily ezinje ngeMarzamemi, Noto, Syracuse (Ortigia), Ragusa, Modica, Scicli! Amagumbi okulala amabini, ikhitshi-igumbi lokuhlala kunye neendawo zokupaka zangaphakathi zibandakanyiwe. "I-Casa Arangio 1, ifestile elwandle" yisisombululo esifanelekileyo sokukwazi ukunandipha le kona yeparadesi ekuphumleni ngokupheleleyo.
ICasa Arangio yivillage eyahlulwe yangamagumbi amabini abelana ngokungena kunye nendawo yokupaka. I-Apartment 1 ilungele intsapho okanye iqela elincinci labahlobo. I-flagship ngokungathandabuzekiyo imbono yolwandle enokuthi yonwabele ukusuka kumagumbi okulala kunye nakwiveranda, indawo efanelekileyo yokuhlala yokuchitha iingokuhlwa ekuphumleni ngokupheleleyo emva kosuku olude elunxwemeni. Indawo yokuhlala inekhitshi yangaphakathi ekhululekileyo-igumbi lokuhlala apho, ukuba kuyimfuneko, ibhedi ye-sofa ingaba yindawo eyongezelelweyo yendwendwe yesine. ICasa Arangio nayo inekona yebarbeque, igumbi lokuhlamba impahla kunye negumbi lokuhlambela elineshawa ngasemva.
ISan Lorenzo yindawo ethandwa kakhulu ngabakhenkethi yolwandle, ngakumbi ehlotyeni. Ulwandle oluhle olunemibala yeCaribbean kunye nokuba kufutshane nelali edumileyo yolwandle iMarzamemi kuthetha ukuba ngexesha lasehlotyeni ihanjelwa ngabakhenkethi abavela kwihlabathi liphela kwaye ihlalwa ziintsapho zalapha ekhaya.
Ehlotyeni kukho i-minimarket encinci enokufikelelwa ngemoto ngemizuzu embalwa.
Ngexesha elinye maxesha onyaka kuhlala yindawo ethandwayo abathandi endalo kunye neendawo ezithile saseSisili ngenxa yendawo emi kuyo ezazidlula embindini phakathi ngamaphondo amabini (eSirakusa, Ragusa) kunye isondele le Vendicari Wildlife Oasis, e Eloro., eNoto nakwiikwari ezikufutshane.
Ndiza kuba semandleni akho kunye nenkxaso ngaphambi nangexesha lokuhlala kwakho kwindawo yam yokuhlala.